Hello Nepal News » भ्यालेन्सियाद्वारा बार्सिलोनाको धुलाइ : चलेन मेस्सीको जादु !
भ्यालेन्सियाद्वारा बार्सिलोनाको धुलाइ : चलेन मेस्सीको जादु !
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनालई ला लिगा फुटबलमा भ्यालेन्सियाले लज्जास्पद हार खुवाएको छ । शनिबार राति भएको खेलमा भ्यालेन्सियाले बार्सिलोनालाई आफ्नो घरमा २–० ले स्तब्ध बनायो । भ्यालेन्सियाको जितमा उरुग्वेन खेलाडी म्याक्सी गोमेज नायक बने ।
भ्यालेन्सियाले खेलको १०औं मिनेटमै बार्सिलोनाविरुद्ध गोल गर्ने अवसर पाएको थियो । बार्सिलोनाका डिफेन्डर पिकेले बक्सभित्र गम्भीर फउल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा गोमेज गोल गर्न असफल भए । उनको प्रहार बार्सिलोनाका गोलकिपरले रोके ।
तर, त्यसपछि उनै गोमेज टिमका लागि नायक र बार्सिलोनाका लागि भिलेन बने । दोस्रो हाफ सुरु भएको ३ मिनेटमै गोमेजको प्रहारले बार्सिलोनाको पोस्टको जाली चुम्यो । तर, सो गोललाई आत्मघाती दिइयो । गोमेजको प्रहार बार्सिलोनाका डिफेन्डर जोर्डी अल्बालाई लाग्दै छिरेको थियो ।
त्यसछि खेलको ७७औं मिनेटमा गोमेजले नै भ्यालेन्सियाका लागि गोल गरेपछि खेल भ्यालेन्सियाले २–० ले जित्यो । यससँगै बार्सिलोनाका नयाँ प्रशिक्षक क्विके सेटिनले तेस्रो खेलमै हार भोगेका छन् ।
अब यो हारपछि पनि बार्सिलोना ४३ अंकसहित लिगको शीर्ष स्थानमा छँदैछ । तर, आइतबार रियल मड्रिडले आफ्नो खेल जिते वा बराबरी खेले लिग लिडर बन्नेछ । यता, विजयी भ्यालेन्सिया २१ खेलबाट ३४ अंक बनाएर पाँचौं स्थानमा चढेको छ ।
प्रकाशित मिति ११ माघ २०७६, शनिबार १८:२७